तालिबानको यस्तो कडा निर्देशनले अफगानिस्तानमा रुवाबासी सुरु, गम्भीर संकट निम्तिने संकेत — Imandarmedia.com
१चुनाबका लागि बार्गेनिङ्ग सुरु, मेयर बन्न १० करोड, वडा अध्यक्षको लागि ५० लाख
२तीन करोड नेपालीका लागि दुखत: खबर, एमसीसी पासगर्ने देउवाको भित्रि सड्यन्त्र छताछुल्ल
३ओलीलाई महाधिवेशनबाट विदा गर्ने १० भाईको तयारी, बालकोटमा भूकम्प
४प्रचण्डले छापामार शैलीमा गरे सेनामाथि हमला, जंगीअड्डामा खैलाबैला
५माधव नेपाललाई अर्को धोका, कांग्रेसले तोड्यो महत्वपूर्ण सहमति
६घरभाडा तिर्न नसक्ने महिलासँग यौनसुख माग्ने घरबेटी छ्याप्छ्याप्ती, यस्तो छ भित्रि रहस्य
७आर्यनको जमानत खारेज, के गर्लान शाहरुख खान अब ?
८बालुवाटर काण्डले लियो चर्को रुप, केपीका बिश्वास पात्र बिष्णु पौडेललाई पक्राउ पुर्जी
९विमानस्थलमा लफडा, सांसद काण्डले मच्चायो हंगामा
१०पारस शाहलाई सरप्राइज दिदै पूर्णिका शाह गरिन यस्तो घोषणा, पूर्वराज परिवारमा तरङ्ग
११कांग्रेसकी चर्चित सांसदले जन्माइन बिबाह नै नगरी बच्चा
१२एमाले नेता सुवास नेम्वाङ जाँड खाएर मातेपछि हंगामा, भिडियो सहित
१स्टुडियोमै कुटिए ऋषि धमला, रामधुलाई गर्ने अतिथि को हुन् ?
२प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा दाहालको निधनप्रति दुःख व्यक्त
३तालिबानका नयाँ प्रधानमन्त्री अपहरण, विश्वभर तरंग
४कांग्रेसकी चर्चित सांसदले जन्माइन बिबाह नै नगरी बच्चा
५बालकोटबाट आयो ओलीबारे दुःखद खवर, एमाले नेता कार्यकर्ता निरास
६चिनियाँ नेतालाई मृत्युदण्ड, प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका थिए रात्रीभोज
७माओवादीको बलियो खम्बा ढल्यो, प्रचण्डकै दाहिने हात एमालेमा प्रवेश
८प्रधानमन्त्री देउवाको घरमा चोरी, अहिले सम्मको सबै सम्पत्ति स्वहा
९गृह मन्त्रालय भित्रको अर्को ठुलो काण्ड बाहिरियो, पति-पत्नी दुवै तनावमा
१०को हुन् कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, के हो राष्ट्रपतिसँगको नाता ?
११बास बस्न सुटुक्क चन्द्रागिरिको रिसोर्टमा किन पुगिन् राष्ट्रपति भण्डारी, खुल्यो यस्तो रहस्य
१२चिनियाँ सेनाले हतियारसहित भारतीय सेनाको गस्ती टोली नियन्त्रणमा लियो
तालिबानको यस्तो कडा निर्देशनले अफगानिस्तानमा रुवाबासी सुरु, गम्भीर संकट निम्तिने संकेत
एजेन्सी। अफगानिस्तानमा फेरि तालिबान शासन फर्किएको छ । आइतबार तालिबानले राजधानी काबुलमा नियन्त्रण गरेका छन् । यससँगै राष्ट्रपति अशरफ गनी र कूटनीतिज्ञहरुले देश छाडेका छन् । काबुल र राष्ट्रपति भवनमा नियन्त्रण गरेपछि तालिबानी प्रवक्ताले युद्ध समाप्त भएको घोषणा गरेका छन् । तालिबानले सरकारी कर्मचारीहरुलाई चेतावनी दिँदै २० वर्ष पहिले जस्ता थिए त्यस्तै बन्न भनेको छ ।
अफगानिस्तानमा तालिबान फर्किएसँगै सरकारी कर्मचारीको कठिनाइ बढेको छ । यद्यपि तालिबानले कर्मचारीहरुलाई नयाँ सुरुवात गर्न भनेको छ । तालिबानले सरकारी कर्मचारीलाई २० वर्ष पहिले तालिबान शासनमा जसरी काम गर्ने अब त्यही बाटोमा फर्किन भनेको छ । तालिबानले कर्मचारीलाई नयाँ सुरुवात गर्न र भ्रष्टाचार, घोटाला, अल्छीपनासँग सावधान रहन भनेको छ ।
तालिबानका राजनैतिक प्रवक्ता मोहम्मद नइमले अल जजीरा टेलिभिजनसँग भने ‘अफगानिस्तानका जनता र मुजाहिदीनहरुको लागि आजको दिन निकै ठूलो दिन हो । २० वर्षको बलिदान र उनीहरुको मेहनतको फल आज प्राप्त भयो । अल्लाहलाई धन्यवाद छ । देशमा युद्ध समाप्त भयो ।’
नइमले अफगानिस्तानको नयाँ सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने छिटै प्रस्ट पारिने बताएका छन् । उनले भने ‘अफगानिस्तान अलग थलग रहन चाहँदैन र शान्तिपूर्ण तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउन आह्वान गर्छ । हामी हाम्रो देशको, हाम्रा जनताको स्वतन्त्रता चाहन्थ्यौं र हामी त्यहाँसम्म पुगेका छौं । हामी कसैलाई पनि अरु कसैलाई निशाना बनाउनको लागि हाम्रो जमिन प्रयोग गर्न दिने छैनौं ।’
मुल्ला बरादर र अखुंदजादामध्ये कसले सम्हाल्छन् तालिबानी सत्ता ? के हो उनीहरुको हैसियत ?
लिबानले अफगानिस्तानमा कब्जा गरेको छ । अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी र उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेहले देश छाडेका छन् । यस्तोमा अब सत्ताको नेतृत्व कुन तालिबानी नेताले गर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्नको जवाफमा २ नामको सबैभन्दा बढी चर्चा छ । ती नाम हुन् मुल्ला अब्दुल गनी बरादर (माथि तस्वीरमा दायाँतर्फका) र हिब्लुल्लाह अखुंदजादा । यी दुई नेता को हुन् र तालिबान संगठनभित्र उनीहरुको हैसियत के हो ?
मुल्ला अब्दुल गनी बरादर
मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ती ४ जनामध्ये एक हुन् जसले १९९४ मा तालिबान संगठनको गठन गरेका थिए । सन् २००१ मा अमेरिकाको नेतृत्वमा अफगानिस्तानमा भएको आक्रमणमा तालिबानलाई सत्ताबाट हटाइएको थियो । त्यतिबेला उनी नाटो सैन्य बलविरुद्ध विद्रोहका प्रमुख बनेका थिए । पछि फेब्रुअरी २०१० मा अमेरिका र पाकिस्तानको एक संयुत्तः सैन्य अभियानमा उनलाई पाकिस्तानको कराची सहरबाट गिरफ्तार गरिएको थियो ।
साल २०१२ सम्म मुल्ला अब्दुल गनी बरादरको बारेमा धेरै जानकारी थिएन । त्यो समयमा अफगानिस्तान सरकार शान्ति वार्तालाई बढावा दिन जुन बन्दीहरुलाई रिहा गर्न माग गर्थ्यो उनीहरुको सूचीमा बरादरको नाम प्रमुख हुन्थ्यो । सेप्टेम्बर २०१३ मा पाकिस्तानी सरकारले उनलाई रिहा गरेको थियो । तर यो स्पष्ट हुन सकेको थिएन कि उनी पाकिस्तानमै बसे वा बाहिर गए ।
मुल्ला बरादर तालिबानका नेता मुल्ला मोहम्मद उमरका सबैभन्दा विश्वासिला सिपाही र डेप्युटी थिए । जब उनलाई गिरफ्तार गरियो त्यतिबेला उनी तालिबानका दोस्रो सबेभन्दा ठूला नेता थिए । अफगानिस्तान प्रशासनका बरिष्ठ अधिकारीहरुलाई सधैं यो लाग्थ्यो कि बरादरको कदका नेताले तालिबानलाई शान्ति वार्ताको लागि मनाउन सक्छन् ।
०१८ मा कतारमा अमेरिकासँग वार्ता गर्नको लागि तालिबानको कार्यालय खुल्दा उनलाई तालिबानको राजनीतिक दलको प्रमुख बनाइयो । मुल्ला बरादर सधैं अमेरिकासँग वार्ताको समर्थन गर्थे । १९९४ मा तालिबानको गठनपछि उनले एक कमाण्डर र रणनीतिकारको भूमिका सम्हालेका थिए । मुल्ला उमर जीवित रहँदै उनी तालिबानको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने र दैनिक गतिविधिका प्रमुख थिए ।
उनी अफगानिस्तानका सबै युद्धमा तालिबानको तर्फबाट अहम भूमिका निभाइरहे र खासगरी हेरात र काबुल क्षेत्रमा सक्रिय थिए । जब तालिबानलाई सत्ताबाट हटाइएको थियो त्यतिबेला उनी तालिबानका डेप्युटी रक्षा मन्त्री थिए । उनको गिरफ्तारीको समयमा अफगानिस्तानका एक अधिकारीले बीबीसीसँग भनेका थिए ‘उनकी पत्नी मुल्ला उमरकी बहिनी हुन् । तालिबानको सारा पैसाको हिसाब उनी नै राख्छन् । उनी अफगान बलविरुद्ध सबैभन्दा खतरनाक आक्रमणको नेतृत्व गर्थे ।
तालिबानका अन्य नेताहरुजस्तै मुल्ला बरादरमाथि पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उनलाई यात्रा गर्न र हतियार खरिद गर्न प्रतिबन्ध थियो । २०१० मा गिरफ्तार हुनुभन्दा पहिले उनले निकै सीमित सार्वजनिक बयान दिएका थिए । २००९ मा उनले इमेलमार्फत न्युजवीक पत्रिकालाई जवाफ दिएका थिए । अफगानिस्तानमा अमेरिकाको बढ्दो सक्रियताप्रति इंगित गर्दै उनले तालिबान अमेरिकालाई भारीभन्दा भारी नोक्सान पुर्याउन चाहेको भनेका थिए ।
उनले जबसम्म हाम्रो जमिनबाट दुश्मनको अन्त्य हुँदैन तबसम्म हाम्रो जिहाद चलिरहन्छ भनेका थिए । इन्टरपोलका अनुसार मुल्ला बरादरको जन्म उरुजगान प्रान्तको देहरावुड जिल्लाको वीटमाक गाउँमा १९६८ मा भएको थियो । उनको सम्बन्ध दुर्रानी कबिलासँग भएको मानिन्छ । अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति हमिद कारजाइ पनि दुर्रानी हुन् ।
हिब्तुल्ला अखुंदजादा अफगान तालिबानका प्रमुख नेता हुन् जो इस्लाम धर्मका विद्वान हुन् र कान्दाहारका हुन् । उनले नै तालिबानको दिशा परिवर्तन गरेर अहिलेको अवस्थामा पुर्याएको मानिन्छ । तालिबानको गढ रहेको कान्दाहारसँग उनको सम्बन्धले उनलाई तालिबानको बीचमा पकड बनाउन सहयोग गर्यो । १९८० को दशकमा उनले सोभियत संघविरुद्ध अफगानिस्तानी विद्रोहका कमाण्डरको भूमिका निभाएका थिए । तर, उनको पहिचान सैन्य कमाण्डर भन्दा धार्मिक विद्वानको रुपमा बढी छ ।
उनी अफगान तालिबानको प्रमुख बन्नुभन्दा पहिले पनि तालिबानका शीर्ष नेताहरुमध्ये एक थिए र धर्मसँग सम्बन्धित तालिबानका आदेश उनले नै दिन्थे । उनले दोषी ठहरिएका हत्या र अवैध यौन सम्बन्ध राख्नेहरुको हत्या र चोरी गर्नेहरुको हात काट्ने आदेश दिएका थिए । हिब्तुल्लाह तालिबानका पूर्वप्रमुख अख्तर मोहम्मद मंसुरका डेप्युटी पनि थिए । मंसुरको मे २०१६ मा अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमा मृत्यु भएको थियो । मंसुरले आफ्नो इच्छापत्रमा हिब्तुल्लाहलाई आफ्नो उत्तराधिकारी घोषित गरेका थिए ।
पाकिस्तानको क्वेटामा हिब्तुल्लाहको भेटघाट जुन तालिबानी शीर्ष नेताहरुसँग भयो उनीहरुले नै उनलाई तालिबानको प्रमुख बनाएको मानिन्छ । समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार इच्छापत्र पनि उनको नियुक्तिलाई वैधता दिनको लागि थियो । यद्यपि तालिबानले उनको चयनलाई सर्वसम्मतिबाट भएको निर्णय भनेको थियो । करिब ६० वर्षका मुल्ला हिब्तुल्लाहले आफ्नो धेरैजसो जीवन अफगानिस्तानमा नै बिताएका छन् । उनको क्वेटामा तालिबानका शुरासँग पनि नजिकको सम्बन्ध छ । हिब्तुल्लाहको नामको अर्थ ‘अल्लाहको तर्फबाट प्राप्त उपहार’ हो । उनी नूरजाइ कबीलासँग सम्बन्धित छन् ।
अन्तराष्ट्रिय सँग सम्बन्धित
चुनाबका लागि बार्गेनिङ्ग सुरु, मेयर बन्न १० करोड, वडा अध्यक्षको लागि ५० लाख
तीन करोड नेपालीका लागि दुखत: खबर, एमसीसी पासगर्ने देउवाको भित्रि सड्यन्त्र छताछुल्ल
ओलीलाई महाधिवेशनबाट विदा गर्ने १० भाईको तयारी, बालकोटमा भूकम्प
प्रचण्डले छापामार शैलीमा गरे सेनामाथि हमला, जंगीअड्डामा खैलाबैला
माधव नेपाललाई अर्को धोका, कांग्रेसले तोड्यो महत्वपूर्ण सहमति
घरभाडा तिर्न नसक्ने महिलासँग यौनसुख माग्ने घरबेटी छ्याप्छ्याप्ती, यस्तो छ भित्रि रहस्य
आर्यनको जमानत खारेज, के गर्लान शाहरुख खान अब ?
बालुवाटर काण्डले लियो चर्को रुप, केपीका बिश्वास पात्र बिष्णु पौडेललाई पक्राउ पुर्जी
विमानस्थलमा लफडा, सांसद काण्डले मच्चायो हंगामा
पारस शाहलाई सरप्राइज दिदै पूर्णिका शाह गरिन यस्तो घोषणा, पूर्वराज परिवारमा तरङ्ग